पटक पटक पहोरोको च’पेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकमा आज फेरी ६ रेक्टर भूकम्पले भ’त्कायो घर ! – iNews16
पटक पटक पहोरोको च’पेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकमा आज फेरी ६ रेक्टर भूकम्पले भ’त्कायो घर !
बुधवार बिहान ५:२० बजे सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाई गएको ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्काले नारायण सुवेदीको दुई तले घर भ’त्किएको हो। लगातार भइरहेको वर्षाका कारण ग’लेको जमिनमा भूकम्प जाँदा घरको माथिल्लो तलाको भित्ता भ’त्किएको र छेवैमा बाँ’धिएको गाईलाई पुरेको भए पनि उद्धार गरिएको सुवेदीले बताए।
भूकम्पले पर्वत कुश्मा नगरपालिका–१ पाङको तल्लो पाङमा एक घर भ’त्किएको छ।
Previous अनशनरत यी महान डा. केसी भो’कभो’कै बि’रामी जाँच्दै, [उहाँको सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ]
Next कुलमान घिसिङको समर्थन गर्दै जोरपाटीमा प्रद’र्शन
By user user 28 mins ago
By user user 29 mins ago
By user user 40 mins ago
By user user 49 mins ago